श्रीमतीले अनौठो प्रयाँक गरेर शिशिरसँग लिईन् बद्ला। ‘‘तपाईको गोजीमा केटीको झुम्का भेटियो’ भन्दै शिशिरको सातो उ डाईन” (भिडि यो हेर्नुस) – Ap Nepal
श्रीमतीले अनौठो प्रयाँक गरेर शिशिरसँग लिईन् बद्ला। ‘‘तपाईको गोजीमा केटीको झुम्का भेटियो’ भन्दै शिशिरको सातो उ डाईन” (भिडि यो हेर्नुस)
June 6, 2021 1550
शिशिर भण्डारीको नयाँ युट्युब च्यानल शिशिर भण्डारी इन्टरटेनमेन्टमा अर्को नयाँ भिडियो आएको छ, जस्ले केहि समयमै चर्चा पाएको छ । यस भिडियोमा शिशिरकी श्रीमतीले उनलाई प्रयाँक गरेकी छिन् ।
शिशिर कामको शिलशिलामा टाढा रहेका बेलामा शिशिरलाई प्रयाँक गरिएको हो । तपाईको गोजीमा केटीको झुम्का भेटियो भन्दै शिशिरलाई श्रीमतीले रुवाईन् । यस पुर्व पनि शिशिरले श्रमितीलाई अनौठो प्रयाँक गर्दै रवएका थिए, जुन निकै भाईरल भएको थियो ।
लकडाउनको समयमा शिशिर र उनको श्रमितीको भिडियोहरु हेरेर दर्शकहरुले रमाईलो गरिरहेका छन् । शिशिर पनि समाज सेवासँगै रमाइृला भ्लगहरु बनाउनमा व्यस्त छन् । यस्रबिच उनी इन्ट्रा फाउन्डेसको सहयोग बाँड्नका लागि पर्सा जिललामा गएका थिए । पर्सा जिल्ला पुग्दा नै शिशिरलाई श्रीमतीले प्रयाँक गरेकी हुन् । शिशिर सँगै नायक रमित ढुँगाना र दिलिप रायमाझी पनि थिए ।
नयाँ युट्युब च्यानल शिशिर भण्डारी इन्टरटेनमेन्टमा अर्को नयाँ भिडियो आएको छ, जस्ले केहि समयमै चर्चा पाएको छ । यस भिडियोमा शिशिरकी श्रीमतीले उनलाई प्रयाँक गरेकी छिन् ।
Prev“कालो ढुसी”बाट बच्न र रो’ग लाग्नै नदिन के गर्ने ? यसो भन्छन् वरिष्ठ चिकि; त्सकहरु !
Nextपाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरून् -हेर्नुहोस् आज बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २४ गते सोमबार राशिफल
तातोपानी पिउँदा हुन्छन् यस्ता नसोचेका फाइदै-फाइदा हे र्नुहोस्